Qasab Maaha Inaad gudubtaa! W/T: Xamse Cumar Kujoog – WARSOOR
– Arday hibo u leh sawir samaynta oo aan wax badan uga baahnayn inuu fahmo Xisaabta,
– Arday “Injineer”- ah oo aan Taariikhda iyo Suugaantu macno sidaa u sii mug leh u samaynayn,
– Arday kale oo qalin-maal noqon kara oo aan dan iyo muraad wayn u lahayn derajada uu ka keeni karo “Kimisratiga”,
– Mid kale oo ciyaaryahan in uu noqdo maanka ku guntaday oo inuu jidhkiisa dhisaa ay uga muhimsan tahay inuu “Fiisigis”- xoog saaro.
– Maxaynu dhammaanteen u doonaynaa in ubadkeennu wada noqdaan dhakhaatiir, sidii oo ay waajib tahay in qof kastaa isagu is daweeyo?!,
– Sidoo kale maxaynu u wada doonaynaa in ubadkeennu wada noqdaan Injineerro ,sidoy in fooqaq la wada dhistaa waajib tahay?!
– Tolow miyyaynaan u baahnay qof dab gelinta yaqaanna? Mid kale oo biyo gelinta belo ku qaba? Dawaarka iyo qurxinta dharka mid khatar ku ah iyo ku kale oo badan.